Kiobà : Manakana mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2008 17:55 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, Português, 日本語, Español, English
Tianao hitakoritsika ve ny blogosfera Kiobàna ? Bahano ary ny famakiana blaogy tian'ny maro. Hatramin'ny nibahanan'ny manam-pahefana Kiobana blaogy tsy manohana ny fitondrana avy ao Havana tamin'ny fiantombohan'ity herinandro ity, dia nanohana tanteraka ny mpitoraka blaogy Kiobàna ny diaspora mpiblaogy – indrindra moa fa i Yoani Sancehz sy ny blog-ny Generacion Y, izay toa voalohany voapala.
El Diario de la Resistencia II sy Cuba File avy amin'ny lahatsoratra tao amin'ny Reuters :
Sanchez, whose critical Generacion Y blog received 1.2 million hits in February, said Cubans can no longer visit her Web page (http://www.desdecuba.com/generaciony/) and two other home-grown bloggers on the Web site on a server in Germany. All they can see is a “error downloading” message.
Sanchez, manana ny blaogy mavitrika Generacio Y izay nahazo mpitsidika 1.2 tapitrisa tamin'ny febroary, dia nilaza fa ny Kiobàna dia tsy afaka intsony mamangy ny pejiny (http://www.desdecuba.com/generaciony/) sy blaogy roa hafa mipetraka amin'ny server any Alemana. Misy hafatra fotsiny milaza fa “diso ny fampidinana ny pejy”.
Ny Cuban Triangle [Kiobàna telomirazoro] kosa mifandray amin'ny namany any Kiobà dia milaza fa “voabahana ilay pezy, dia nisy ‘fomba fidirana miadana’ navela natao. Fa ity ‘fomba fidirana miadana’ ity tsy manova ny hevitr'i El Cafe Cubano, izay mampitaha ny fitondran'i Raul Castro amin'ny apartheid:
Raha faly ery ny mpanao gazety sy ny mpitoraka blaogy sasany mandoka an'i raulita ohatry ny hoe olomasina izy na mpamoha ny FAHAFAHANA. Ampiasainy ny modely sinoa rey olona! Wow, misy izao ny solosaina, fa tsy misy ampy vola mividy azy,ary hitanareo fa misy fanampenana sy fibahanana amin'ny aterineto.
Blog for Cuba manampy hoe:
Inona no ho ataon'ny Kiobàna amin'ireto solosaina vaovao ireto? Zavatra iray fantatra dia tsy afaka hamaky blaogy Kiobàna mampiseho hevitra tsy manaiky ny fanjakana ny Kiobàna. Raul ilay mpanavao dia mbola Raul ilay mpanitsaka.
Tsy misy mahagaga an'i Blue Star Chronicles izany, fa kosa misy tsy azony kely :
Toa tian'ny progressives (fantatra koa hoe komonista) amin'ny tanintsika ity ny governementa Kiobàna amin'izao fotoana. Henoko foana hoe toa tsara noho ny antsika io governementa io. Henoko foana hoe tsara noho ny antsika ny fitsaboana any, etc… Eny fa ireo olona milaza izany dia olona manambola misotro “latte” ary liberaly tsy voatery miaina voatsindrin'ny mpanjadona. Tsy mbola nahita na iray tamin'ireo ary aho nifindra monina tany.
Tim Worstall manako ity hevitra ity amin'ny sorany, ary TonyTeri.com manaiky fa
it takes extreme guts for her (Sanchez) to write about what she does. She actually has to roam about Cuba blogging from hotels and other areas with Internet access usually reserved for foreigners.
Mahery fo tokoa izy (Sanchez) manoratra momba ny ataony. Voatery mandeha eran'ny Kiobà mitoraka blaogy avy amin'ny hotely sy toerana hafa misy aterineto izay natokana ho an'ny vahiny.
Manindrahindra izany i 1Click2Cuba:
Mety mitondra olana be ny mitoraka blaogy avy any Kiobà (fonja), fa tsy nanakana mpitoraka blaogy an-jatony izany akory izay tena vonona hamoaka ny heviny. Tato ho ato ny mpitoraka blaogy Kiobàna dia manao akanjo toa ny mpivahiny, mody miteny amin'ny fomba fitenin'ny vahiny, ary mampiasa ny aterineto avy amin'ny hotely (tsy afaka miditra anaty hotely ho an'ny mpivahiny ny teratany Kiobàna). Raha ao anatin'ny hotely i Yoani Sanchez dia mila manoratra haingana be. Tsy matahotra fotsiny mantsy hoe sao tratra, fa koa tena lafo vidy be ny aterineto. ATerineto adiny iray dia mandoa $6, mitovy amin'ny antsasan'ny karaman'ny Kiobàna tsotra isam-bolana. Ny mpitoraka blaogy tsy miankina toa an'i Sanchez dia mila manamboatra ny pejiny amin'ny servers any ivelan'ny Kiobà, ary manana mpamaky betsaka kokoa izy any ivelan'ny Kiobà.
Ny mpamaky dia ireo tany any Karaiba hafa, ary Child of the Revolution manamarika fa
ilay andrana nanidy ny blaogy sasany dia nahazo vahana tamin'ny mpanao gazety erantany, hatramin'ny The Sun Sentinel ka hatramin'ny gazety miseho isan'andro miandany ankavia toa an'i The Guardian.
Jefferson Lives mieritreritra lalina momba ity toejavatra ity :
Nahaliana ahy hatramin'izay ny fananan'ny tany tsirairay ny lalanany momba ny World Wide Web. Azo fa tena sarotra ny mametraka lalana eran-tany. Kanefa vaovao sy fahafahana no esorina imbetsaka rehefa mamehy ny fahafahan'ny mpanao gazety sy fahafahana hitoraka blaogy eo amin'ny laharana iraisam-pirenena. Mitondra ny fanontaniana hoe, anatin'ny sehatra tsy misy sisintany, manitsakitsaka ny zon'ny teratany amerikana ve i Kiobà raha mametra ny fahitana ity pejy ity, sa kosa zon'ny terataniny ihany no voahitsany?
… i Uncommon Sense kosa manontany :
Mitady fomba mora handrangitana ny mpanao didy jadona Kobana va ianao?
Tsidiho Generacion Y, ny blaogy avy any Kiobà be mpankasitraka indrindra.